Fetsy ho an'ny iOS 8 (I): afaho ny toerana iCloud | Vaovao IPhone
Vaovao IPad | | iCloud, Fampianarana sy torolàlana
Rehefa avy nanontany anay taminay tao amin'ny podcast anay ny maro taminay momba ny toro-hevitra sy tetika ho an'ny iOS, izay notokanana tamin'ny podcast tamin'ity herinandro ity, dia nieritreritra ihany koa izahay fa tsara ny manokana andian-dahatsoratra ho an'io lohahevitra io ihany. Navoakanay ilay faritra manazava ny fomba hanafoanana ny habaka iCloud, olana iray izay azo antoka fa maro taminareo no nanana mihoatra ny indray mandeha ary ankehitriny miaraka amin'ny fahatongavan'ny Sary ao amin'ny iCloud dia ho matetika kokoa aza. Te hitantana tsara kokoa ny fitehirizanao ao amin'ny rahona Apple ianao nefa tsy mila mandoa habaka bebe kokoa? Azo antoka fa mahasoa anao ireo torohevitra ireo.
1 Afaho ny habaka amin'ny famafana ny angona fampiharana
2 Vonoy ny iCloud Photo Library
3 Hamafa ireo backup iCloud
Afaho ny habaka amin'ny famafana ny angona fampiharana
Ny apps IOS dia mitahiry rakitra maro ao amin'ny iCloud. Ny angona sasany dia KB kely fotsiny handefasana eo anelanelan'ny fitaovana, fa ny sasany kosa mitahiry MB maro ary GB aza rehefa mampakatra sary, horonan-tsary, sns. Ny mahita hoe iza amin'ireo rindranasa mihinana ny habaka iCloud dia tena tsotra, ary mamafa ihany koa ireo angona ireo.
Mandehana any amin'ny Settings> iCloud> Storage, ny efijery izay hahitanao ny fitehirizana feno sy misy. Tsindrio ny "Tantano fitehirizana" ary hiditra amin'ny menio ahafahanao mahita fizarana hafa ianao. Andeha hojerentsika izao ny fizarana "Documents and data" izay hisy ny lisitry ny rindranasa miaraka amin'ireo angon-drakitra notehirizany tao amin'ny iCloud, nalahatra araka ny habeny. Amin'ny fipihana ny iray amin'izy ireo dia hahita takelaka fampahalalana manokana ianao, ary amin'ny fipihana ny bokotra «Edit» eo amin'ny zoro ambony ambony dia azonao atao ny mamafa ny angona rehetra.
Safidy tena ilaina ny mamafa ny angon-drakitra amin'ireo rindranasa ireo izay tsy tianao ampidirina amin'ny iCloud, satria toa tsy mahasoa anao izany na satria tsy ampiasainao intsony ilay rindranasa. Iray amin'ireo fampiharana izay mibahana toerana malalaka indrindra ny WhatsApp, satria ny nomaniny ho solon'izay nataonao tao amin'ny iCloud dia mampakatra ny sary sy ny chat rehetra, mora dia mora tokoa ny mitana GB maromaro.
Vonoy ny iCloud Photo Library
ICloud Photo Library dia zava-baovao tena ilaina ao amin'ny iOS 8, fa ho an'ny kaonty 5GB tsy dia atolotra loatra satria ho lany ny toerana malalaka ao amin'ny iCloud atsy ho atsy. Raha liana amin'ny fampiasana an'io safidy io ianao dia tokony handinika tsara ny fanitarana ny kaonty iCloud anao. Raha tsy izany dia esory ilay safidy ary hahazo MB (na GB) be dia be aza ianao hampiasaina amin'ny angona hafa. Mandehana any amin'ny Settings> iCloud> Storage> Tantano Storage> iCloud Photo Library ary kitiho ny «Deactivate and Delete».
Ataovy ao an-tsaina fa raha manafoana io safidy io ianao dia hanjavona ireo sary rehetra voatahiry ao amin'ny iCloud amin'ny fitaovana rehetra. Raha toa ka Apple dia manolotra anao 30 andro hanitsiana, ka raha manenina ianao dia afaka mamerina ny sarinao.
Hamafa ireo backup iCloud
Ny famerenana amin'ny iCloud dia tena mety. Ny iOS 8 dia manao azy ho azy rehefa mifandray amin'ny herinao sy tambajotra WiFi ny fitaovanao, izay mety ho mpamonjy amin'ny fahavoazana, fangalarana na fandefasa tsy nahy. Fa ny backup dia mitaky habaka betsaka. Tadidio fa raha manana fitaovana maro ianao, ny tsirairay dia hiaraka amin'ny kaonty iray ihany, ary mora fa ny kopia ihany no mampiasa ny 5GB anananao.
Misy safidy maromaro afaka manamboatra an'io:
Fafao ny kopian'ny fitaovana taloha: Azo antoka fa raha miditra amin'ny Fikirana> iCloud> Storage> Tantano fitehirizana ianao dia hahita kopia voafafa maro, ny sasany avy amin'ny fitaovana taloha izay tsy anananao intsony. Tsindrio ny kopian'ny fitaovana taloha ary esory izany.
Vonoy ireo backup iCloud amin'ny fitaovana tsy dia manandanja. Tena zava-dehibe ve ny famerenana ny iPad? Ho an'ny maro dia mety tsy izany, ary manangona habaka ilaina izy io. Araho ny dingana mitovy amin'ny taloha ary hamafa izany. Avy eo mankanesa any amin'ny Settings iPad ary esory ny backup ao amin'ny iCloud.
Safidio izay apps tohana. Ao anatin'ny fikirana> iCloud> Storage> Tantano ny fitehirizana mifidy ilay fitaovana tianao hamboarina ary ho hitanao ny menio iray miaraka amin'ny fampahalalana rehetra momba ilay kopia, izay fampiharana no ampidirina ary ohatrinona ny isan'ny fampiharana ao anatin'io kopia io. Ity misy zavatra betsaka hijerena tsara: raha manana ny sary ao amin'ny iCloud ianao, maninona no tadiavinao ny famerenana ny horonan-tsarinao amin'ny iCloud? Na raha manana ny dika mitovy amin'ny WhatsApp ao amin'ny iCloud ianao, maninona no ampidiro ao amin'ny backup an'ny fitaovanao koa izy io? Jereo izay rindranasa tena tianao ampidirina ao anaty kopia ary esory ireo izay tsy manao izany dia ho hitanao ny fihenan'ny habaka takiana amin'ny kopia manaraka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » iCloud » Fetsy ho an'ny iOS 8 (I): esory ny habaka iCloud
Ricardo E. dia hoy izy:
Tena fanampiana tsara. Ho lasa adala aho amin'ireo hafatra mangataka fahazoana toerana ao amin'ny iCloud
Valiny tamin'i Ricardo E.